Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Waxbarashada Juqraafiga Qaranka: Bangiga Masar
Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • Education
National Geographic Learning, oo ah astaanta Kooxda Cengage, ayaa maanta ku dhawaaqday inay iskaashi muddo-dheer ah la galeen Wasaaradda Waxbarashada Masar, iyagoo manhajka fasalka 4-6 siinaya ku dhawaad ​​toddoba milyan oo arday oo Masar ku nool.
Iskaashiga National Geographic, oo bixin doona agabka fasalka daabacaadda iyo dhijitaalka ah, ayaa qayb ka ah aragtida Wasiirka Waxbarashada Dr. Tarek Shawki ee Waxbarashada 2.0-isbadal buuxa oo lagu sameeyo nidaamka waxbarashada Masar marka la gaaro 2030-oo lagu saleeyay diiradda xirfadaha nolosha, hal-abuurka, muhiimka ah fekerka iyo kibirka Masar. Iyadoo ka badan 20 milyan oo arday ayaa is qorayee K-12, Masar waxay leedahay nidaamka waxbarasho ee ugu weyn Bariga Dhexe iyo Afrika. Si kastaba ha noqotee, waxbarashada Masar taariikh ahaan lama jaanqaadin diyaarinta ardayda 21 -ka ahst xirfadaha xalinta dhibaatada qarniga ee loo baahan yahay si loo dhiso xirfado macno leh.
“Waxaan rabnaa in ardaydu wax bartaan nolosha oo dhan, ee ma ahan imtixaan,” ayuu yiri Dr. Tarek Shawki, Wasiirka Waxbarashada iyo Waxbarashada Farsamada Masar. “Waxaan u baahannay lamaane naga caawin kara inaan ardayda ku qalabeynno xirfado ay ku shaqaystaan ​​mustaqbalka iyo guusha nolosha, laga bilaabo da'da hore. Waxaan dooranay Barashada Juqraafiga Qaranka maxaa yeelay waxa ku jira, naqshadeynta, iyo barbaarinta ayaa si dhab ah u keenaysa barashada nolosha ardayda. ”
Si loo taageero isbeddelka waxbarasho ee Masar, National Geographic Learning waxay bixinaysaa manhaj loogu talagalay Ingiriisiga, Daraasaadka Bulshada, Xirfadaha Xirfadda iyo Teknolojiyadda Macluumaadka iyo Isgaarsiinta (ICT). Xirfadaha Xirfadaha iyo ICT ayaa si gaar ah muhiim ugu ah aragtida Waxbarashada 2.0 ee Masar, maadaama ay u soo bandhigaan 10-12-jirka shaqooyin kala duwan oo laga yaabo inaysan aqoon badan u lahayn, iyo xirfadaha ay u baahan doonaan si mustaqbalka loogu guuleysto dhinacyadaas .
"Wasaaradda Waxbarashada ee Masar waxay qaadatay hab heer sare ah si ay u abuurto manhaj qasab ah, hubinta jiilka soo socda inay horumariso aqoonta, xirfadaha nolosha, iyo qiyamka guusha mustaqbalka," ayuu yiri Alexander Broich, Madaxweynaha Cengage Global Businesses iyo Maareeyaha Guud ee Luqadda Ingiriisiga Waxbarid. “Kooxda Cengage, waxaan si xooggan u aaminsanahay baahida loo qabo in ardayda loo diyaariyo nolosha iyo shaqada. Hadafkayagu waa inaan hubinno in ardaydu aysan diyaar u ahayn shahaado kaliya, laakiin ay diyaar yihiin shaqo. Wasaaradda Waxbarashada Masar waxay si xooggan ula jaan -qaadaysaa hawshan, waxaanan ku faanaynaa inaan gacan ka geysanno sidii waxbarasho loo soo nooleyn lahaa, iyadoo loo adeegsanayo isbeddelka dhiirrigelinta ah ee Dr. Shawki 2.0. ”
Ka sokow bixinta manhajka Ingiriisiga oo qayb ka ah iskaashiga, waxa ku jira ICT -ga waxaa lagu bixin doonaa Ingiriis iyo Carabi si ay u caawiso barashada luqadda Ingiriisiga ee ardayda oo qayb ka ah waxbarashada dugsiga hoose.
“Aqoonta luuqadda Ingiriisiga ayaa waliba door muhiim ah ka cayaarta caawinta u diyaarinta bartayaasha adduunka oo dhan suuqa shaqada,” Broich ayaa sii waday. "Waxaan aaminsanahay in kala bar adduunka ay ku hadli doonaan ama baran doonaan Ingiriisiga marka la gaaro 2030 -ka maxaa yeelay Ingiriisiga aadka u yaqaana ayaa ah albaabka mustaqbal wanaagsan oo malaayiin adduunka ah."
Manhajku wuxuu ka kooban yahay Masaariyiin dhiirrigelin leh iyo Baarayaasha Juqraafiga Qaranka si ay gacan uga geystaan ​​ka -qaybgalka, dhiirrigelinta iyo ku -abuurka kibirka bartayaasha Masaarida.
“National Geographic waxay leedahay taariikh dheer oo iftiiminaysa oo ilaalinaysa layaabka adduunkeenna,” ayuu yiri Fred Hiebert, Archaeologist oo deggan deegaanka National Geographic Society, iyo xubin ka tirsan Golaha La -talinta Barashada Juqraafiga ee iskaashiga Wasaaradda Masar. “Sheekooyinka ku saabsan saamaynta taariikhda aadanaha iyo dhaqanku ku leeyihiin meeraheenna waxay qayb ka yihiin dhaxalka gaarka ah ee National Geographic. Ma jiro tusaale ka fiican tan kan National Geographic uu ka qoray Masar, oo ah mid ka mid ah dhaqammada ugu qadiimsan ee la yaqaan. ”
Hiebert wuxuu sii waday inuu dhaho, "Wada -shaqayntani waa fursad fantastik u ah National Geographic si kor loogu qaado codadka maxalliga ah iyo saynisyahannada Masar."
Dhammaan dugsiyada hoose ee Masar oo dhan waxay bilaabeen adeegsiga manhajka Barashada Juqraafiga Qaranka Oktoobar 9 -keedii, iyagoo ka bilaabaya fasalka afraad sannad -dugsiyeedka hadda jira, waxayna ku ballaadheen fasalka shanaad iyo lixaad labada sano ee soo socota.
Ku saabsan Barashada Juqraafiga Qaranka
National Geographic Learning, oo ah astaanta Kooxda Cengage, waa hormuud u ah daabacaha waxbarashada ee Barista Luqadda Ingiriisiga iyo suuqyada waxbarashada sare ee adduunka oo dhan. Barashada Juqraafiyeedka Qaranka, waxaan aaminsanahay in barte ku hawlan oo dhiirigelin leh uu noqon doono mid guulaysta, waxaannu ku qaabaynnaa agabkeenna hab sheeko -wadareed aad u dhex -dhexaad ah taas oo ah hab wanaagsan oo loogu yeedhi karo isku -xidhyadaas. Si aad wax badan u barato, booqo: eltngl.com.
Ku saabsan Kooxda Cengage
Kooxda Cengage, shirkad tiknoolajiyad waxbarasho oo caalami ah oo u adeegaysa malaayiin bartayaal ah, waxay bixisaa alaabo dhijitaal ah oo tayo leh iyo adeegyo tayo leh oo ardayda ku qalabeeya xirfadaha iyo kartida loo baahan yahay si ay shaqo ugu diyaar garoobaan. In ka badan 100 sano, waxaan awood u siinnay awoodda iyo farxadda barashada iyada oo leh nuxur la isku halleyn karo, iyo hadda, oo ah aagag dijital ah oo isku dhafan.